SAWIRRO: Israel, Baxrayn iyo Imaaraadka oo heshiiskii cilaaqaadka ee ay wada gaareen kala saxiixday – Calanka.com
in Dibedda — by admin —	September 16, 2020
Israa’iil ayaa heshiis taariikhi ah la saxiixatay waddamada Carabta ee kala ah Imaaraatka iyo Baxrayn. Heshiiskan ayaa lagu saxiixay Aqalka Cad ee looga taliyo Maraykanka. Heshiiskan taariikhiga ah ayaa loogu magacdaray “Arbaham Accord”.
Heshiiskan waxaa dhexdhexaadintiisa lahaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ku dhowaaqay labada heshiis muddo bil ah gudaheed.
Waddamada Imaaraadka iyo Baxrayn ayaa noqonaya labadii waddan ee ugu horreeyey ee heshiis nabadeed la gaara Israa’iil muddo tobannaan sano ah. Waxaa horey heshiis uu u dhexyaallay waddamada Israa’iil iyo Masar oo heshiis gaaray sannadkii 1979-kii, halka waddamada Israa’iil iyo Urdun ay iyaguna heshiis gaareen sannadkii 1994-kii.
Madaxweyne Trump ayaa sheegay in shan ama lix waddan oo kale ay doonayaan inay heshiis nabadeed la gaaraan Israa’iil.
SACUUDIGA: Xubno dil ugu xukunnaa dilkii wariye Khashogji oo la cafiyay
Donald Trump oo dal labaad oo carbeed ku cadaadiyay aqoonsiga Israel
Iran oo lagu eedeeyay in ay dhaafisay Yuraaniyamkeeda in ka badan 'toban jeer' intii loo ogolaa
UK: Dad dhowr ah oo lagu mindiyeeyay magaalada Birmingham iyo booliska oo howlgal wada